နလေ့ညျနခေ့ငျး တဈရေးတဈမော အိပျခွငျးဆိုငျရာ သိကောငျးစရာမြား – Sonic Generation
သငျဟာ နလေ့ညျနခေ့ငျးမှာ တဈရေးတဈမောလောကျအိပျရတာကို နှဈသကျတတျတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပွီး သငျ့အနနေဲ့ အလုပျကလညျး ရှုပျနတေယျ။ ဘယျလောကျအိပျသငျ့လဲ မသိဘူးဆိုရငျ ဒါလေးကို ဖတျထား မှတျထားသငျ့ပါတယျ.
10-20မိနဈအိပျစကျခွငျးဟာ သငျ့ကို တီထှငျကွံဆနိုငျစှမျးကို မွှငျ့တငျပေးတဲ့ အပွငျ သငျ့ခန်ဓာကိုယျကို အနားပေးရာလဲရောကျပါတယျ။ ဒါဟာ သငျ့ကို တကျကွှလနျးဆနျးစမေယျ။ အားအငျပွညျ့ဝစမေယျ။ စိတျသဈလူသဈပွနျလညျမှေးဖှားခွငျးကိုလညျး ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ လေးလံထိုငျးမှိုငျးခွငျးအလဉျြးမရှိဘဲ နိုးနိုးခွငျးမှာ တကျတကျကွှကွှ အလုပျလုပျနိုငျသှားပါတယျ။
သငျဟာ 30မိနဈလောကျ အခြိနျယူပွီး အိပျတတျတယျဆိုရငျတော့ သငျဟာ အရမျးကို ပငျပနျးနှမျးနယျနရေငျ အဆငျပွပေါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ အိပျရာနိုးလာတဲ့ အခါမှာ လနျးဆနျးမှုကို ရနိုငျမှာပါ။
1နာရီကွာအောငျ အိပျစကျခွငျးဟာတော့ သငျ့ရဲ့ မှတျဉာဏျစှမျးအငျကို တိုးတကျစပွေီး သငျ့ကို Communication Skill, အာရုံစူးစိုကျမှုနဲ့ မှတျဉာဏျစှမျးအငျကို တိုးတကျစမှော ဖွဈပွီး တဈဖကျမှာတော့ သငျဟာ အိပျရာနိုးတဲ့အခါ အရကျနာကသြလို မူးမောနတောမြိုး အားအငျခြိနဲ့တာမြိုးဖွဈတတျပါတယျ။
ခဏလောကျပဲ မှေးမယျဆိုပမေယျ့ မိနဈ90လောကျထိ အိပျမိပွီဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ ခံစားမှုတှေ တိုးတကျတာတှေ အစဉျလိုကျလုပျရတဲ့ လုပျငနျးစဉျပိုငျးတှမှော ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ ရလဒျကို ရနိုငျမှာဖွဈပမေယျ့ ဒါဟာ အိပျမကျမကျနိုငျတဲ့ အဆငျ့ထိရောကျတဲ့ အတှကျကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ ပွနျလညျ နိုးထဖို့ အနညျးငယျ ခကျခဲနပေါလိမျ့မယျ။
သငျဖွဈခငျြတဲ့ အခကျြပျေါမူတညျပွီဒ သငျ့အနနေဲ့ အခြိနျဘယျလောကျပေးပွီး အိပျသငျ့လဲဆိုတာကို ရှာဖှလေိုကျနာရငျး ကနျြးမာတဲ့ ဘဝတှကေို ပိုငျဆိုငျစဖေို့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးအပျပါတယျ.။
နေ့လည်နေ့ခင်း တစ်ရေးတစ်မော အိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ
သင်ဟာ နေ့လည်နေ့ခင်းမှာ တစ်ရေးတစ်မောလောက်အိပ်ရတာကို နှစ်သက်တတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သင့်အနေနဲ့ အလုပ်ကလည်း ရှုပ်နေတယ်။ ဘယ်လောက်အိပ်သင့်လဲ မသိဘူးဆိုရင် ဒါလေးကို ဖတ်ထား မှတ်ထားသင့်ပါတယ်.
10-20မိနစ်အိပ်စက်ခြင်းဟာ သင့်ကို တီထွင်ကြံဆနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ အပြင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို အနားပေးရာလဲရောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ကို တက်ကြွလန်းဆန်းစေမယ်။ အားအင်ပြည့်ဝစေမယ်။ စိတ်သစ်လူသစ်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်းအလျဉ်းမရှိဘဲ နိုးနိုးခြင်းမှာ တက်တက်ကြွကြွ အလုပ်လုပ်နိုင်သွားပါတယ်။
သင်ဟာ 30မိနစ်လောက် အချိန်ယူပြီး အိပ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အရမ်းကို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အိပ်ရာနိုးလာတဲ့ အခါမှာ လန်းဆန်းမှုကို ရနိုင်မှာပါ။
1နာရီကြာအောင် အိပ်စက်ခြင်းဟာတော့ သင့်ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းအင်ကို တိုးတက်စေပြီး သင့်ကို Communication Skill, အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းအင်ကို တိုးတက်စေမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်မှာတော့ သင်ဟာ အိပ်ရာနိုးတဲ့အခါ အရက်နာကျသလို မူးမောနေတာမျိုး အားအင်ချိနဲ့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ခဏလောက်ပဲ မှေးမယ်ဆိုပေမယ့် မိနစ်90လောက်ထိ အိပ်မိပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ခံစားမှုတွေ တိုးတက်တာတွေ အစဉ်လိုက်လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ပိုင်းတွေမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ကို ရနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် ဒါဟာ အိပ်မက်မက်နိုင်တဲ့ အဆင့်ထိရောက်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ပြန်လည် နိုးထဖို့ အနည်းငယ် ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။
သင်ဖြစ်ချင်တဲ့ အချက်ပေါ်မူတည်ပြီဒ သင့်အနေနဲ့ အချိန်ဘယ်လောက်ပေးပြီး အိပ်သင့်လဲဆိုတာကို ရှာဖွေလိုက်နာရင်း ကျန်းမာတဲ့ ဘဝတွေကို ပိုင်ဆိုင်စေဖို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်.။
Total Website Visits: 300136